Momba anay - Ningbo Dashuo Stationery Co., Ltd.
Stapler mavesatra andraikitra
Stapler mpamonjy asa
Punch Hole tokana
Punch Hole roa
Ningbo Dashuo Stationery Co., Ltd.naorina tamin'ny 2017, dia miorina ao Qiantong Town, Ninghai County, Ningbo City, atsinanan'i Sina. Izy io dia mifanila amin'ny seranan-tsambo Ningbo Beilun sy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ningbo Lishe miaraka amina fitaterana mety. Birao matihanina sy mpanamboatra fitaovam-pianarana ity manambatra ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana, ny varotra ary ny serivisy. Ny orinasa dia miompana amin'ny fampivoarana sy famokarana stapler, milina fanaovana totohondry, mpanandratra fantsika, milina fanapahana penina mandeha ho azy ary andiam-vokatra hafa.
Hatramin'ny nananganana azy tamin'ny taona 2017, ny orinasa dia nifikitra hatrany tamin'ny filozofia famokarana sy fitantanana ny "fanavaozana tsy miankina sy fikatsahana ny hatsarana". Hatreto dia nahazo patanty 30 mahery teo amin'ny sehatry ny haitao izy io. Ny fifikirana tsy miova amin'ny orinasa amin'ny "mpanjifa aloha, laza voalohany, kalitao voalohany" fotoam-panompoana, miezaha hanome ny vokatra mahomby indrindra, ny vokatra dia aondrana any Etazonia, Japan, Europe, Middle East, atsimo atsinanan'i Azia, firenena 60 mahery ary ny faritra, faritany sy tanàna 30 mahery any Sina no manana tambajotra marketing "HUACHI", ary mahazo ny fankasitrahana ny tsena anatiny sy ivelany.
Ny velaran'ny orinasa misy 15000 metatra toradroa, mpiasa maherin'ny 300, miaraka amin'ny fitaovana famokarana mandroso sy ekipa teknika ary ekipa r & D, hatramin'ny nananganana ny orinasa dia nahazo voninahitra maro. Izahay dia manolo-tena ho mpanamboatra birao sy mpamatsy kojakojam-pianarana indrindra, ary ho tonga birao sy mpamatsy fitaovam-pianarana ary mpamatsy serivisy an-tsekoly.
Izahay dia feno fahatokisana amin'ny ho avy s ...
Ny faha-26 Sina Yiwu International Small C ...
Fetiben'ny Stationery Ninghai 2020 / ny faha-9 Chin ...
Midira amin'ny Gazetinay